Umndeni impela kumiswa eziyinkimbinkimbi zezenhlalo. Izazi zezokuhlalisana kwabantu bajwayele bakubheka njengodumo okuyinkambiso Ubuhlobo obuseduze phakathi kwelungu ngalinye umphakathi okuhlotshaniswa umthwalo, umshado nobuhlobo bomkhaya, ukuswela nomphakathi.
Uyini isikhundla emphakathini we umndeni?
Inkinga ukudlula imikhaya ukuzivumelanisa umphakathi sibi kakhulu ososayensi bezenhlalo abenza isifundo sale ndaba. Enye yezinto eziyinhloko e-komphakathi nabashadikazi abane yiso isimo sezenhlalo omkhaya.
I izici eziyinhloko lapho sicabangela isimo yokuzijabulisa amathuba impahla emphakathini, behlanganiswe umshado, khona kwindima, ukuzibophezela zemfundo. Kukhona futhi ezingaba engcupheni ukuthi ukwandisa amathuba ukulahlekelwa isimo kuluthola. Ngakho, igebe emshadweni ngokuvamile uholela ekubeni Oqala ukungezwa aze agcine ubudlelwano komzali nengane. Ushade ukwazi ngezinga elingakanani ukuze kuqedwe lezi mkhuba omubi.
Imindeni kabani Ukwakheka has a isakhiwo eziyinkimbinkimbi, ukunikeza evundile okungamila kumiswa isithombe olungafani ukuxhumana phakathi kwabantu, okuyinto kuvula amathuba ngaphezulu komphakathi asemasha. Nokho, unikeza izici ezingezinhle lo mkhaya wezemfundo, kungaba kuqashelwe khona ukungakhululeki lapho kunesidingo ukwabelana izizukulwane eziningana. Siba Sibi Nakakhulu isimo kuleli cala, lokhu kusilela isikhala siqu, isikhala ukwakha umbono ezimele.
Lokho kusho zenhlalo isimo umndeni? Ukwakheka kwabo is ithonywe kakhulu ukuqaliswa idatha ye imfundo yomphakathi imisebenzi ethile. Phakathi imisebenzi esemqoka ye emndenini okulandelayo:
Wokuzala - ukuzala, ukukhiqizwa kabusha ngomqondo begazi.
Sikhungo - intuthuko engokomoya inzalo. somshado isibopho kumiswa abakwazi kuphela ukudala izimo for ukuzalwa futhi bekhulisa ingane. Ukuba khona emkhathini ezithile endlini kubonakala kwetinhlavu izingane ngabanye, futhi ngezinye izikhathi sithinta umuntu kukho konke ukuphila.
YOMNDENI - isici esibaluleke kunazo zonke izinga omkhaya kuncike. Kuyinto ikhono silondoloze isimo zomkhaya ezingokwenyama, ukunakekela abantu ongakabi ukuvuthwa noma asebekhulile.
Material - kuncike ikhono amalungu omndeni ukusekelana ngokwezezimali.
Uma ucabangela isimo sezenhlalo omkhaya, izinhlobo isimo, kufanele siqale sibheke nomqondo imikhaya evamile. Nokho, umqondo kuba kunalokho ngokungenasizathu futhi ayinaso nohlaka olucacile. Jwayelekile ubhekwa omkhaya bayakwazi ukuqinisekisa yabo nenhlalakahle esiphansi ezingeni eyanele, ukwakha indawo enempilo ukuze le komphakathi wengane, banakekele ukuvikelwa umndeni.
Naphezu kakhulu incazelo, umuntu igodla isimo sezenhlalo omkhaya, uhlangabezana nobunzima. Njengoba inkinga evamile lapha ukunikeza zezingxabano izinganekwane futhi aliziphikisi ezenzeka ngokuqondene ushintsho ezingeni elisha emphakathini, ithonya izimo kancane kancane kokushintsha eziphilayo.
Ivimba ibe isimo senhlalo omkhaya isifiso ngokweqile ukusiza izihlobo ze-non-umnakekeli, kumiswa isimo ukunakekelwa ngokweqile noma okunye sengqondo uyazehlisa kakhulu ngase-close.
Nakani nayo izincwadi zabo kulokho okubizwa ngokuthi emikhayeni enezinkinga, ucabangela isimo sezenhlalo omkhaya. Yiziphi isakhiwo eziyinkinga?
kakhulu kwencazelo isikhundla emphakathini kubonisa khona nobunzima, hhayi kuphela ebuhlotsheni obuphakathi izihlobo, kodwa uma ufuna abantu endaweni yabo emphakathini. iziyaluyalu kwenqondo zivamise ukwenzeka lapha ngenxa izidingo unmet eziningana noma ilungu lomndeni.
Inkinga ezivamile emikhayeni engenabo ubunye kuba phambi nobuhlobo okungenamsoco naphakathi kombhangqwana noma umzali nomntwana. Ukuhlala kwabahluphekayo, imikhaya inkinga, izingane kufanele sifune izindlela zokuthuthuka benqoba ubunzima ngokwengqondo ahlukahlukene. Lokhu ngokuvamile kuholela ekwakhekeni zokuhluka psychogenic ezenzeka kamuva kwenqatshwa esingokomzwelo imvelo, ukuthuthukiswa ezibuthakathaka imizwa yabazali.
Uma sikhuluma isimo sezenhlalo omkhaya, izinhlobo isimo, kubalulekile ukwaba into okwandile ezifana umndeni asocial. Lapha, ukuxhumana phakathi kwabantu eba nzima kakhulu.
Call asocial imfundo kungenzeka, lapho abangane bomshado zithambekele ekwenzeni ngendlela zokuvumela noma yini noma yokuphila enokuziphatha okubi. Njengoba izimo ophilayo, kulesi simo angahlangabezani izidingo eziyisisekelo zenhlanzeko kanye nezindlu zangasese. Njengomthetho, emfundweni yezingane ukugibela. Isizukulwane abasebasha ivame ukubhekana ubudlova zokuziphatha futhi ngokomzimba, ihlangabezana nokungathuthuki.
Ngokuvamile, lokhu sigaba sihlanganisa abantu abanale isimo sezenhlalo yomkhaya omkhulu. Isici esiyinhloko ukuthi kuholela ekwakhekeni imvelo onjalo ongaqondile, iyona ukulondeka ngokwezinto ezibonakalayo ongaphakeme.
Emikhayeni ezinesimo evamile noma elichumayo social ngokuvamile kuphakama nezikhathi ukwehla, okuyinto engase iholele ukuthi ukwedlulela kuleso sigaba ephansi ezingeni komphakathi. Amaqembu ingozi eziyinhloko zihlanganisa:
umndeni Okulimazayo - libhekene njalo ukungqubuzana izimo, ukuntula isifiso yakha uxhumano ngokomzwelo, ukuziphatha separative ka owakwakhe, khona izingxabano eziyinkimbinkimbi phakathi komzali nengane.
Imikhaya enomzali ongayedwa - ukungabi khona umzali kuholela elingalungile lokuzibusa wengane, ukunciphisa ukwehluka ubuhlobo obuhle bomkhaya.
umndeni Ngesandla Esiqinile - zibonakala ngokucacile lapho ukubusa komuntu oyedwa, okuyinto kunemtselela ukuphila komkhaya wabo bonke amaqembu ahlobene.
ebhidlikile - kulondolozwe ukuxhumana nomndeni nge indlela ukwehlukana abashadayo uhlala. Lobo bungane ushiye obuqinile ngokomzwelo phakathi kwabantu umndeni, kodwa ngesikhathi esifanayo kungaholela ekulahlekelweni kwabazali babo indima.
Tula Philharmonic MEMA amakhonsathi